Ngalaba na-ahụ maka njem okporo ụzọ mechiri ọwara abụọ n’ime ọwara atọ si na akwa mmiri George Washington abata na Fort Lee. Nke a malitere n’isi ụtụtụ n’oge ndị mmadụ ji aga ebe dị ịche ịche.
A na-ebo Gọvanọ Christie na ndị otu ya ebubo na ha mechiri okporo ụzọ ahụ na Fort Lee maka iji taa ndị obodo ahụ afụfụ n’ihi na onye meyọ Fort Lee bụ Mark Sokolich akwadoghị Chris Christie mgbe Ọ na-azọ ọkwa gọvanọ na New Jersey.
Kemgbe ahụ, ndị ọkacha mara na-eme nnyocha ka A mata ma aka Gọvanọ Christie ọ dịkwa ọcha, tumadị ebe Ọ bụ na ndị na-arụrụ ya ọrụ, Bill Baroni na David Weinstein, kwetere na ha mara ebe mmiri siri banye n’opi ụgbọgụrụ.
Ọ bụrụ na E mecha chọpụta n’aka Gọvanọ Christie adịghị ọcha, E nwere ike ịgba ya onwe ya akwụkwọ n’ụlọ ịkpe.